Fomba fiasa Carbon - Tontolon'ny elanelana
Karazan-tsakafo simika sy ara-batana
Atomic Weight : 12.011
Fikarohana: Carbon dia misy fahalalahana ara-boajanahary ary efa fantatra hatramin'ny fotoana nialoha ny taonjato.
Configuration Electron : [He] 2s 2 2p 2
Teny niaviana: latina carbo , kôlônôlemana alemana, karbônianina frantsay: arina na arina
Isotopes: Misy karazana isotopia voajanahary fito. Tamin'ny taona 1961, ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Chemistry Pure sy Applique dia namoaka ny karbôna-12 ho fototra ijoroan'ny vato atomika.
Ny fananana: Carbon dia hita maimaim-poana amin'ny natiora amin'ny endriny telo: ny amorphous (lampblack, boneblack), graphite, ary diamondra. Ny endrika fahefatra, karbaona fotsy, dia heverina fa misy. Diamondra dia iray amin'ireo fahasalamana mafy indrindra, miaraka amin'ny teboka avo dia avo sy ny fanilikilihana.
Fampiasana: Carbon dia mamorona andalana maro samihafa amin'ny fampiharana tsy misy fetra. An'arivony kofehy an'arivony no fototry ny fiainana. Ny diamondra dia sarobidy toy ny vatosoa ary ampiasaina amin'ny famongorana, biriky, ary toy ny orsa. Ny grafite dia ampiasaina ho toy ny tady azo anaovana vy metaly, amin'ny pensilihazo, ho an'ny fiarovana amin'ny harafesina, ho an'ny fanonerana, ary amin'ny maha-moderatera azy amin'ny fampihenana ny tsy fisian'ny atomika. Ny karbônôkôpôbôfida dia ampiasaina amin'ny fanesorana tsiro sy fofona.
Sokajin-teny filamatra: tsy metaly
Density (g / cc): 2.25 (graphite)
Kilaometatra (K): 3820
Fisehoan-javatra: mainty, mainty (mainty)
Atao amin'ny atomika (cc / mol): 5.3
Ionic Radius : 16 (+ 4e) 260 (-4e)
Heziny manokana (@ 20 ° CJ / g mol): 0.711
Debye Temperatura (° K): 1860.00
Fiarovana voalohany (kJ / mol): 1085.7
Firenena Oxidation : 4, 2, -4
Structure crystal : hexagonal
Radion'ny atomika: 70 pm
Atomic Radius (calc.): 67 amio
Covalent Radius : 77 alina
Van der Waals Radius : 170 hariva
Magnetic Ordering: diamagnetika
Fitetezana ara-pahasalamana (300 K) (Graphite): (119-165) W · m-1 · K-1
Fitsaboana ara-pahasalamana (300 K) (diamond): (900-2320) W · m-1 · K-1
Tandindomin-doza (300 K) (diamond): (503-1300) mm² / s
Mohs Hardness (sary): 1-2
CAS Registry Number : 7440-44-0
Tsikera: Vonona ny hitsapa ny fahalalanao ny zava-misy momba ny karbaona? Raiso ny Quiz.
Miverena any amin'ny Tabilao Periodika
10 Facts mahagaga sy mahaliana
Symbian ny singa tsy ampiasaina
Inona no singa voalohany fantatra?
Semimetaly na lisitra Metady
Ireo singa ao amin'ny vatan'olombelona sy ny zavatra ataon'izy ireo
Ny tarehin-javatra sy ny fananana mitarika - Ny singa 82 na Pb
Fianjeranana Steelhead any Central Californie
Fomba fiteny amin'ny teny frantsay Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza
Fahasamihafana eo amin'ny Anatomi sy ny Fiziolojia
University Admissions Winthrop
Ahoana no fanaovana hosoka sandoka?
5 Boky Lehibe ho an'ireo ankizy ao amin'ny College
Ny tsara indrindra amin'ny asa an-tselika
Vehivavy nalaza tamin'ny tantaran'i Amerika Latina
Inona no atao hoe rano?
Nanazava ny hazakazaka
Top Dance Songs 2008 - Lisitry ny hiran'ny dihy tsara indrindra tamin'ny taona 2008 araka ny DJ
Ahoana no hitenenanao ny firaisana?
Rafi-panafarana Arrhenius sy ohatra
Firy taona no niovaan'i Amerika nanomboka tamin'ny 1900?
Fampiasana ny 'Al' arahin'ny infinitive
Revolisiona Amerikana: New York, Philadelphia, & Saratoga
Fampidiran-tserasera ho an'ny Heraldème - A Primer for Genealogists
Ny Asperger's Syndrome - Ny Farany Fiarovana Faran'ny Autism Spectrum
Ny tranga tsy voavahan'ilay Seranam-piaramanidina Long Island
Tsy firenena i Palestina
Ny Ady Lehibe Faharoa: Tankin-doha Alemana